Jobho anopindura (1-22)
“Muri vanyaradzi vanotambudza!” (2)
Anoti Mwari ari kupfura miseve yake akamunanga (12)
16 Jobho akapindura achiti: 2 “Ndakambonzwa zvinhu zvizhinji zvakadai. Mese muri vanyaradzi vanotambudza!+ 3 Mashoko asina zvaanobatsira achazombopera here? Imi maitwa sei kuti muzopindura muchidaro? 4 Ini ndinokwanisawo kutaura sezvamunoita. Kudai zviri kuitika kwandiri zviri izvo zviri kuitika kwamuri,Ndaigona kutaura mashoko anorwadza kwamuriNdodzungudza musoro ndakakutarisai.+ 5 Asi pane kudaro, ndaitozokusimbisai nemashoko emuromo wangu,Uye kunyaradza kwemiromo yangu kwaizozorodza.+ 6 Kana ndikataura, marwadzo angu haanyarari,+Uye kana ndikarega kutaura, marwadzo angu anoderedzwa kusvika papi? 7 Asi iye zvino, iye andipedza simba;+Aparadza imba yangu yese.* 8 Munondibatawo, uye izvi zviri kubva zvava uchapupu,Zvekuti kuondoroka kwangu kunosimuka kuchipupurira pamberi pangu. 9 Hasha dzake dzandibvambura-bvambura, uye anondivenga.+ Anorumanisa mazino ake akanditsamwira. Muvengi wangu anondidzvokora nemaziso eruvengo.+ 10 Vakandishamira miromo yavo,+Uye vakarova matama angu vachindituka;Vanondimomotera vakawanda.+ 11 Mwari anondiisa mumaoko evakomana vadiki,Uye anondikanda mumaoko evakaipa.+ 12 Ndakanga ndisina chaindinetsa, asi akandiputsa;+Akandibata necheseri kwemutsipa ndokundirovera pasi;Akabva atanga kundipfura nemiseve yake. 13 Vanhu vake vanopfura neuta vanondikomba;+Anotsemura itsvo dzangu+ asinganzwi tsitsi;Anodururira nduru yangu pasi. 14 Anondidhiritsa serusvingo, achiramba achivhura mekupinda namo;Anondimhanyira sezvinoita murwi. 15 Ndakasonanidza masaga kuti ndifukidze ganda rangu,+Uye ndakaviga kuremekedzwa kwangu* muguruva.+ 16 Chiso changu chatsvuka nekuchema,+Uye pamaziso angu pane mumvuri werufu, 17 Kunyange zvazvo maoko angu asina kukuvadza munhu,Uye munyengetero wangu wakachena. 18 Haiwa iwe nyika, usafukidza ropa rangu!+ Uye kuchema kwangu ngakushayiwe nzvimbo yekuzororera! 19 Kunyange iye zvino, chapupu changu chiri kudenga;Munhu anogona kundipupurira ari kumusoro. 20 Shamwari dzangu dzinondinyomba+Ziso rangu richichema misodzi kuna Mwari.*+ 21 Mumwe munhu ngaatonganise munhu naMwari,Sekutonganiswa kunoitwa munhu nemumwe wake.+ 22 Nekuti makore asara ava mashoma,Uye ndichaenda nenzira isingadzokwi.+
^ Kana kuti “vaya vanoungana neni.”
^ Kana kuti “simba rangu.” ChiHeb., “nyanga yangu.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “rakatarisa kuna Mwari richishayiwa hope.”